Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara snow | Network Meteorology
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara snow
Snow bu ihe anakpo mmiri oyi kpooro kpoo. Ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụ karịa mmiri dị n’ọnọdụ siri ike nke na-ada kpọmkwem n’urukpuru. Snowflakes nwere kristal ice nke, ka ha na-agbadata n’elu ụwa, jiri blanket ọcha mara mma kpuchie ihe niile.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ka e si akpụ kpụrụ akpụ, gịnị kpatara ọ ji adaba, ụdị snow ndị a na-adị na okirikiri ha, na-agụ 🙂
3 Shapesdị Snowflake
4 Snowdị snow
4.1 Ntu oyi
4.2 Icy ntu oyi
4.3 Ntụ ntụ ntụ
4.4 Mmiri ọka
4.5 Echefuola snow
4.6 Crusted snow
4.7 Efere ifufe
4.10 Oghere fusion
4.12 Ọwa mmiri
Ka snow siri daa maara ya dika nevada. Ihe omuma a di otutu otutu mpaghara nke njirimara ya bu ihe di ala ala (kari otutu oge oyi). Mgbe snoo na-aba ụba, ha na-emebi ngwa ngwa obodo ma kwụsị ọrụ kwa ụbọchị na ọrụ ụlọ ọrụ n'ọtụtụ oge.
Ọdịdị nke flakes ọ fractal. Fractals bụ ụdị geometric nke a na-emeghachi na akpịrịkpa dị iche iche, na -emepụta mmetụta ọhụụ dị egwu.
Ọtụtụ obodo nwere snow dị ka ebe ha kacha adọrọ mmasị ndị njem (dịka ọmụmaatụ, Sierra Nevada). N'ihi oke snow na-adaba na ebe ndị a, ị nwere ike ịme egwuregwu dị iche iche dị ka ịgba ọsọ ma ọ bụ snowboarding. Na mgbakwunye, snow na-enye ụfọdụ ala nrọ, nwee ike ịdọta ọtụtụ ndị njem na ị nweta nnukwu uru.
Anyị ekwuola banyere etu snow si bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ nke ndị njem nlegharị anya nakwa na ọ na-ahapụ ọdịdị ala mara mma mgbe ọ na-etolite. Ma olee otu flakes ndị a si etolite?
Snow na-adị obere kristal nke mmiri oyi na-etolite na elu akụkụ nke troposphere site absorption nke ụmụ irighiri mmiri. Mgbe ụmụ irighiri mmiri ndị a na-adakọ, ha na-esonye ọnụ wee ghọọ snowflakes. Mgbe flake nwere ibu karịrị ikuku ikuku, ọ daa.
Maka nke a, ọnọdụ kpụ ọkụ n'ọnụ nke snowflake kwesịrị ịdị n'okpuru efu. Guzobe usoro bụ otu ihe ahụ dị ka snow ma ọ bụ Glasgow. Naanị ihe dị iche n’etiti ha bụ ọnọdụ kpụ ọkụ n’ọnụ.
Mgbe snow dara n’elu ala, ọ na-ewu ma wukwasi oyi akwa. Ọ bụrụhaala na ọnọdụ ikuku dị n'okpuru ogo ogo, ọ ga-adịgide ma nọgide na-echekwa. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị elu, flakes ga-amalite gbazee. Ọnọdụ okpomọkụ nke snowflakes na-etolite na-abụkarị -5 Celsius C. Enwere ike imepụta ya na obere okpomọkụ dị elu, mana ọ na-esikarị na -5 Celsius C.
Na mkpokọta, ndị mmadụ jikọtara snow na oke oyi, mgbe eziokwu bụ na ọtụtụ snowfall na-eme mgbe ala nwere okpomọkụ nke 9 Celsius C ma ọ bụ karịa. Nke a bụ n'ihi na anaghị elebara ihe dị ezigbo mkpa anya: iru mmiri ihu igwe. Iru mmiri bụ ihe na-eme ka snow dịrị n’otu ebe. Ọ bụrụ na ihu igwe dị oke nkụ, a gaghị enwe snow snow ọbụlagodi na ọnọdụ okpomọkụ dị oke ala. Ihe atụ nke a bụ Dry Valleys nke Antarctica, ebe enwere ice, mana anaghị enwe snow.
O nwere mgbe snow na-amị. Ọ bụ maka oge ndị ahụ nke flakes, nke emere site na iru mmiri nke gburugburu ebe obibi, gafere oke ikuku ikuku na-eme ka ha ghọọ ụdị ntụ ntụ nke na-adịghị arapara ebe ọ bụla na nke ahụ dị mma maka egwuregwu ndị ahụ snow.
Igwe a chịkọbara mgbe snow dara nwere akụkụ dị iche iche dabere n'otú ihu igwe si amalite. Ọ bụrụ na enwere ifufe siri ike, snow na-agbaze, wdg.
Ihe flakes na-ejikarị ihe karịrị otu centimita, ọ bụ ezie na nha na ihe ndị mejupụtara na-adabere n'ụdị snow na ọnọdụ ikuku.
Kristal kristal na-abịa n'ụdị dị iche iche: prisms, hexagonal plate ma ọ bụ kpakpando ndị a maara nke ọma. Nke a na - eme ka snowflake ọ bụla pụọ ​​iche, n’agbanyeghi na ha niile nwere akụkụ isii. Ala nke okpomọkụ, nke dị mfe snowflake na obere nha.
Aredị snow dị iche iche dịka o si ada ma ọ bụ site na ya na etu esi echekwa ya.
Ọ bụ ụdị snow na na-etolite ozugbo na ala. Mgbe okpomoku di n'okpuru ihe efu ma nwee oke iru mmiri, mmiri nke di n'elu uwa na-eme ka o kpoo. Mmiri a na-agbakọba na ihu ebe ifufe na-efe ma nwee ike ibuga mmiri ahụ na osisi na nkume ndị dị n'elu ụwa.
Nnukwu flakes feathery ma ọ bụ encrust siri ike nwere ike ịmalite.
Icy ntu oyi
Ihe dị iche n’etiti ntu oyi a na nke gara aga bụ snow a na-ebilite na ọdịdị doro anya dị ka mma agha, mpịakọta na chalices. Nhazi ya dị iche na ntu oyi. Emere ya site na usoro nke sublimation.
Typedị snow a kachasị ama bụrụ fluffy na ìhè. Ọ bụ nke furu efu cohesion n'ihi ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ n'etiti nsọtụ na etiti nke kristal. Snow a na-enye ohere ịgba n’elu n’elu ski.
A na-etolite snow a site na okirikiri na-aga n'ihu nke ịzacha na refreezing ahụhụ site na mpaghara ebe ọnọdụ okpomọkụ dị ala mana anwụ dị. Snow nwere kristal buru ibu ma gbaa gburugburu.
Snow a bu na-ahụkarị na mmiri. Ọ nwere akwa dị nro na nke na-enweghị mmiri na-enweghị ọtụtụ nguzogide. O nwere ike ibute mgbochi mmiri snow snow ma ọ bụ akwa efere. A na-ahụkarị ya ebe mmiri ozuzo dị ala.
Nke a na ụdị na-guzobere mgbe elu gbazee mmiri refreezes na Nleta a ike oyi akwa. Ọnọdụ ndị na-eweta nguzobe snow a bụ ikuku na-ekpo ọkụ, nsị elu nke mmiri, ọdịdị anyanwụ na mmiri ozuzo.
Dị ka ọ dị, oyi akwa nke na-etolite na-adị njọ ma na-agbaji mgbe ski ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ gafere ya. Agbanyeghị, enwere ọnọdụ ebe a akwa, crusty oyi akwa mgbe mmiri na-ezo na mmiri seep site na snow na freezes. Akpịrịkpa a dị nnọọ ize ndụ n'ihi otú ọ si amị amị. Typedị snow a na-agakarị ebe na oge mmiri ozuzo.
Ifufe na-enye mmetụta nke ịka nká, na-agbasa, compaction na mweghachi nke elu-igwe nile nke snow. Nkwado na-arụ ọrụ kacha mma mgbe ifufe na-eweta okpomọkụ ọzọ. N’agbanyeghi na okpomoku nke ikuku na-eweta ezughi iji gbazee snow, ọ nwere ike ime ka ọ sie ike site na mgbanwe. Igwe ikuku ndị a emepụtara nwere ike imebi ma ọ bụrụ na akachasị ala adịghị ike. Nke a bụ mgbe nnukwu mmiri na-etolite.
Aha a ka enyere aha oyi nke uzo uzo di n’elu otutu snow. Akpụrụ a na-emepụta ngosipụta mgbe anwụ na-awa. A na-etolite oyi akwa a mgbe anyanwụ na-agbaze n’elu mmiri snoo ma ọ na-emekwa ka ọ sie ike. Nke a na mkpa oyi akwa nke ice emepụta mini griinụ na ọ na - eme ka agba ndị dị ala gbazee.
Ọ bụ ezigbo oyi akwa ice nke na-emepụta mgbe mmiri na-ajụ n’elu nkume. Akpụrụ ahụ na-akpụ dị amị na-amị amị ma na-eme ka ịrịgo dị egwu.
Ha bụ oghere nke etolitere n'ihi agbaze nke snow na mpaghara ụfọdụ ma nwee ike iru omimi dị omimi. Na nsọtụ oghere ọ bụla, ụmụ irighiri mmiri mmiri na-ekpochapụ na n'etiti oghere ahụ, mmiri ahụ tọrọ atọ. Nke a na - etolite ihe eji etinye mmiri mmiri nke, n’aka nke ya, na - eme ka snow gbazee.
Nhazi ndị a na-ewere ọnọdụ mgbe ngwakọta ngwakọta na-adị nnukwu. Ndị nchegharị bụ ogidi ndị e guzobere site na nkwụsị nke ọtụtụ oghere. E guzobere ogidi ndị na-ewere ọdịdị nke nchegharị. Ha na-eme na mpaghara buru ibu nke nwere ugwu di elu na ala di ala. Ndị nchegharị ga-erute nnukwu mmepe na Andes na Himalaya, ebe ha nwere ike ịtụ ihe karịrị otu mita, nke na-eme ka ije ije sie ike. Ogidi ndị a na-adaberekarị na etiti ụbọchị.
A hiwere ya mgbe oge igbaze ahụ malitere. A na-emepụta netwọọdụ mmiri mmiri site na mmiri. Ezi mmiri anaghị apụta n'elu, ma n’ime blanket nke snow. Mmiri ahụ na-adaba n'ime akpụrụ mmiri ice wee gwụchaa na netwọkụ drainage.
Ọwa mmiri na-asọpụ nwere ike ime ka nnukwu mmiri dị iche iche ma mee ka ịgba ọsọ siri ike.
A na-akpụzi dunes site na omume nke ifufe n'elu snowy. Akọrọ snow snow na-ewe erosive iche na obere mmiri na ebili mmiri.
Ha bu otutu snow n’elu ogbe ndi mejuputara ihe puru iche, ebe obu na ha kowara na-eme ihe na-adighi agbanwe agbanwe nke mmadu puru iwepu site na ngabiga nke ndi mmadu ma obu ihe ndi sitere na ya (ifufe di ike, ima atu). Ọ nwere ike ịmepụta nnukwu mmiri, ọ bụ ezie na ihe egwu ya dị site na ịda n'onwe ya.
Site na ozi a, ị ga-enwerịrị ike ịmata snow nke ọma karị ma mata ụdị snow dị n'oge ahụ oge ọzọ ị ga-aga ebe snow.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara snow
Kacha mma mmiri ozuzo mkpu ngwa